Ny tombony - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Fa maninona no tokony hiasa amin'ny PCBFuture
Mitady manam-pahaizana manokana ve ianao izay hanampy anao hanangona prototypes PCB avo lenta sy hazakazaka ambany amin'ny fotoana sy vidiny mifaninana?
Nandritra ny traikefa an-taonany maro teo amin'ny sehatry ny elektronika, eto ny PCBFuture hanomezana tolotra farany an'ny PCB Assembly ho an'ny mpamorona sy orinasa.
Na mpamorona elektronika ianao mitady prototype manokana PCB fivoriambe na orinasa injeniera mitady hamory tabilao pirinty vita pirinty kely-to-salantsalany, dia tianay ny hanome anao vokatra avo lenta sy serivisy tena tsara.
1. Serivisy fanamboarana PCB avo lenta
PCB no vato fehizoro amin'ny vokatra elektronika. PCBFuture manomboka orinasa avy amin'ny pirinty vita pirinty vita pirinty, izahay izao dia iray amin'ireo orinasam-pamokarana birao pirinty manerantany. Nandalo ny mari-pahaizana momba ny fiarovana UL izahay, ny IS09001: 2008 ny fanamarinana ny rafitra kalitao, ny IS0 / TS16949: 2009 ny fanamarinana ny vokatra otomotera ary ny fanamarinana ny vokatra CQC.
2. Serivisy PCB Turnkey
Miaraka amin'ny traikefa efa am-polony taona lasa teo amin'ny fampandrosoana, fanamboarana, fivoriambe ary fanandramana PCB manokana, afaka manome serivisy isan-karazany izahay, avy amin'ny fivoriambe PCB prototype, fivoriambe PCB boky, karazan-java-manamboatra birao boribory samihafa, serivisy fampidirana singa. Ny serivisy turnkey PCB antsika dia afaka manome fomba fiasa mijanona iray izay afaka manampy anao hitahiry ny vola, ny fotoana ary ny manahirana. Ny serivisinay rehetra dia azo antoka kalitao sy vidiny lafo.
3. Fivoriambe PCB prototype matihanina ary serivisy fivoriambe PCB haingana
Prototype PCB fivoriambe ary fivoriambe PCB fihodinana haingana dia olana hatrany ho an'ny mpamorona sy orinasa elektronika maro. PCBFuture dia afaka mahazo ny prototype fivoriambe PCB ho anao amin'ny vidin'ny fifaninanana amin'ny fotoana fihodinana haingana. Izay hanampy anao hametraka haingana ny vokatra elektronika amin'ny tsena miaraka amin'ny vidiny mirary. Manana ekipa fivorian'ny PCB matihanina sy malefaka izahay mba hikirakira ny lafiny rehetra amin'ny fizotrany ao anatin'izany ny famokarana birao boribory, ny fividianana singa, ny elektronika ary ny fifehezana kalitao. Noho izany ny mpanjifanay dia afaka mifantoka amin'ny endrika sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
4. Ny fotoana fohy sy ny vidiny ambany
Araka ny fomban-drazana, ny mpanjifa dia mila mahazo teny nalaina ary ampitahaina amin'ny mpanamboatra PCB samihafa, mpaninjara singa ary mpamory PCB. Ny fiatrehana mpiara-miombon'antoka samihafa dia handany ny fotoanao sy ny herinao indrindra, indrindra amin'ireo singa samihafa izay sarotra tadiavina. PCBFuture dia nanolo-tena hanampy anao hamaha ny olanao amin'ny fanomezana serivisy PCB maharitra iray azo itokisana, afaka manome prototype sy serivisy fivoriambe PCB ho an'ny volavolan-dalàna izahay. Ny fanamafisana sy ny fanatsorana ny asa, ny famokarana milamina ary ny fifampiresahana kely kokoa dia hanampy amin'ny fampihenana ny fotoana itarihana.
Tokony hampiakatra ny vidiny ve ny serivisy PCB turnkey feno? Ny valiny dia tsia amin'ny PCBFuture. Satria ny habetsaky ny fividianana singa dia be dia be, matetika isika dia afaka mahazo fihenam-bidy tsara kokoa avy amin'ireo mpamokatra ampahany na mpaninjara. Ankoatr'izay, ny rafitra miasa pipelined ho an'ny orinasam-pirinty PCB dia afaka mahomby amin'ny fanodinana RFQ maro be sy baiko. Ny vidin'ny fanodinana isaky ny tetikasa PCB turnkey dia mihena, ary ny vidinay dia ambany kokoa noho ny fiantohana kalitao mitovy.
5. Serivisy manampy sarobidy
> Tsy ilaina ny kaomandy min, ilaina ny sombiny 1
> Fanohanana ara-teknika 24 ora
> Serivisy fanamarihana fanangonana PCB 2 ora
> Serivisy azo antoka kalitao
> Fizahana DFM maimaim-poana ataon'ireo injeniera matihanina
> 99% + taham-pahalianan'ny mpanjifa